२२ पौराणिक रक कभरहरूको भव्य एनिमेटेड GIFs क्रिएटिव अनलाइन
त्यहाँ रक कभरहरू छन् जुन सही ग्राफिक सफलताहरू हुन्। जे भए पक्कै पनि, मुख्य घटक ध्वनि र संगीत सामग्री हो, ग्राफिक्सले धेरै कुरा गर्न सक्दछ किनकि यसले प्रश्नमा समूहको पहिचान र ब्रान्डलाई सिधा मजबूत गर्न मद्दत गर्दछ।
के तपाईंलाई चट्टान ईतिहासको पौराणिक कभरहरू थाहा छ? आज म हातमा बनाएको केहि शानदार एनिमेटेड GIFs को पार आयो jbetcom र म पक्का छु कि तपाईंले मलाई मन पराउनु भएको संगीत विधा जस्तो मज्जा लिनुहुनेछ।
1973 - गुलाबी फ्लोयड - चन्द्रमाको गाढा पक्ष
कालोमा हराएको पृष्ठभूमिमा एउटा गिलास पिरामिड गाडीको प्रकाशको दा f्गो किरणलाई रंगको गाढा इन्द्रेणीमा परिणत गर्ने गाडी बन्छ। अहिलेसम्मको बिलबोर्ड चार्टमा सबैभन्दा लामो चलिरहेको एल्बमको लागि सरल डिजाइन, १ like बर्ष भन्दा बढी जित्ने पैसा जस्ता गीतहरू र विश्वव्यापी रूपमा 15० मिलियन भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू सहित।
1976 - चुम्बन - रक र रोल ओवर
समूहको विलक्षण सदस्यहरूको अनुहार आगोको बलमा सम्मिलित सपाट चित्रमा र समूहको लोगोसँग चिसो निलोमा अन्तमा देखाइन्छ। कालो रंगले दागिएको खाली चरणको बीचमा, ताप, भावना र गतिशीलताको स्रोत सिर्जना हुन्छ। यो एक ब्यान्ड द्वारा पाँचौं एल्बम हो कि यसको छवि र यसको लेबल एक धेरै प्रभावी तरीकाले बनाउन को लागी प्रबंधित छ। हार्ड लक लक महिला र कलिंग डा। प्रेम जस्ता गीतहरूको साथ उनीहरू एक मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू बेच्न सफल भए। एक anecodtha रूपमा यो कभर दानव विश्वविद्यालय, डिज्नी चलचित्रमा देखा पर्‍यो।
1984 - मेटेलिका - बिजुली सवारी गर्नुहोस्
बिजुली कुर्सीले चिसो र परित्यक्त संरचनाको केन्द्र ओगटेको छ र यसको वरिपरि बिजुली चल्छ। यो समूहको सबै भन्दा राम्रो एल्बमहरू मध्ये एक हो र ies मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू प्राप्त गर्न व्यवस्थित भयो, आश्चर्यजनक तथ्यलाई विचार गर्दा जुन त्यस समयमा यो धेरै जवान हेभी ब्यान्ड थियो र यसले व्यावहारिक रूपमा केवल समेकित गरेको थियो।
1987 - एलिस कूपर - आफ्नो मुट्ठी र चिल्ला उठाउनुहोस्
एक भयानक हावाको साथ हामी एक पुरुषको हत्केलामा र चिच्याउने एक जना मानिसको अनुहारको साथ प्रस्तुत हुन्छौं। यो एक पौराणिक कभर र मान्यता प्राप्त एल्बम बन्यो जसमा उनका धेरै गीतहरू समाविष्ट हुन्छन् इफिनामस फिल्ममा जुन मिथकीय एलिस कूपर पनि ट्रम्पको रूपमा देखा पर्दछ।
1987 - गन एन गुलाब - विनाशको लागि भोक
बाक्लो मानेहरू र क्रसमा लch्गर भएका खोपडीहरू चट्टान र आजीवन भक्तिप्रतिको भावना व्यक्त गर्ने द्रुत र प्रभावकारी तरिका थियो जुन पक्कै पनि शैलीका सबैभन्दा वफादार प्रशंसकहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने। यो पहिलो गन्स एण्ड रोज्स एल्बम थियो जसले तिनीहरूलाई विश्वको नक्शामा राख्यो र ती पलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भारी ब्यान्डको रूपमा राख्यो, वास्तवमा आज पनि यसलाई इतिहासको सबैभन्दा सफल डेब्यू एल्बम जस्तो एन्थिमसको साथ महसुस हुन्छ। जंगल।
१ 1987 1een - हेलोवीन - सात कुञ्जीहरूको भाग, भाग १
यो जर्मन मेटल ब्यान्ड हेलोवीनको डेब्यू थियो। यसको आवरणमा एक प्रकारको अनुहार भिक्षु छ जसले क्रिस्टल बललाई कुञ्जीले भरिदियो। यसलाई समालोचकहरूले समूहको सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यहरू मध्ये एक मान्दछन्।
1988 - खराब धर्म - दुःख
एक जवान मानिस बल्दै गरेको आगोले लियो र हामीतिर फर्केर एक शहरीकरणको सडक देख्छ। निस्सन्देह यो पंक विधामा मुख्य एल्बम मध्ये एक थियो, वास्तवमा एनओएफएक्सबाट फारा माइकले यसलाई एल्बमको रूपमा परिभाषित गरे जसले सबै परिवर्तन गर्‍यो।
1988 - यहूदा पुजारी - यसलाई तल राम
आगो र लाभाले डुबेको ग्रहलाई परमेश्वरको मुट्ठीले क्रूरताले हिर्कायो। यो जुदास पुजारी समूहको एघारौं एल्बम हो र यसलाई खारेज गरिएको टर्बोको पुन: रेकर्ड गरिएको र अन्तिम एल्बममा जसमा डी होल्यान्ड ड्रमको जिम्मेवार थियो भनेर चिनिन्छ।
1988 - मेटेलिका - र सबैका लागि न्याय
न्यायको देवीलाई धेरै डोरीहरूले घिसार्दैछन् जुन विभिन्न मोर्चहरूबाट आक्रमण गर्छन् र त्यसले पैसा गुमाउँदछन्। यो सायद हाम्रो समूहको सब भन्दा प्रतिबद्ध एल्बम हो र सब भन्दा सफल मध्ये एक हो: कुलमा, विश्वव्यापी रूपमा १० करोड भन्दा धेरै प्रतिहरू बिक्रि भयो।
१ 1991 XNUMX १ - निर्वाणा - केहि छैन
यो नब्बेको दशकको आइकन हो र पक्कै पनि यो संकलनमा यो हराउन सकेन। कभरको रूपमा, एक ना naked्गो बच्चा पानीको मुनि देखिन्छ र डलरको बिल निम्न प्रलोभनको रूपमा। यो दिईएको छ, हामी कल्पना गर्न सक्छौं माछावाला को हो: उद्योग, जसले पैसा र रेकर्ड ठेक्का मार्फत कलाकारको शुद्धता समाप्त गर्दछ। कुलमा यसले 30० लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो र यो पक्कै पनि कुनै पनि संगीत प्रेमीको लागि आवश्यक छ।
१ - 1993 Bl धमिलो - आधुनिक जीवन फोहर हो
एउटा रेल ल्यान्डस्केपको माध्यमबाट द्रुत गतिमा र धुवाँ र धुवाँ खनिरहेको छ। यो ब्लरको दोस्रो एल्बम र एल्बमको पूर्ववर्ती हो जसले युरोपमा वैकल्पिक चट्टानको इतिहास सँधै परिवर्तन गर्‍यो।
१ 1994 Ran Ran - रानसीड - जाऔं
रगत रातो दाग र पृष्ठभूमिमा एक मानचित्रको छेउमा लेट गो सर्वर माथि उठाइन्छ। जे होस् यो सूचीमा अन्य एल्बमबाट टाढा थियो, यसले स्वीकृति र पर्याप्त बिक्री दर प्राप्त गर्‍यो।
१ The 1995 - - स्मासिing पम्पकिनहरू - मेलन कोल्ली र अनन्त दु: ख
क्लासिक पोशाकमा एक महिला एक्स्टसीमा एक स्टारबाट बाहिर आउँछिन्। यो एल्बम समूहको अभिप्राय थियो किनकि अन्य धेरै चीजहरूको बीचमा यसले बिलबोर्ड २०० को पहिलो स्थान जित्न सफल भयो,
1997 - एयरोस्मिथ - नौ जीवन
भाग्यको सट्टा उदासी पा wheel्ग समूहको सुनौलो युग र अमेरिकी बजारमा विजय हासिल गर्दै एरोसमिथको बाह्रौं एल्बमको कभरमा चित्रित थियो।
1998 - Korn - नेता अनुसरण गर्नुहोस्
एक निर्दोष खेलको बीचमा शून्यमा डुब्न लागेका रातो एउटी युवतीले समूहको भावनात्मक र भयावह आरोपलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन्। यो एक उत्तम विक्रेता र र्‍याप धातुको राम्रो प्रतिनिधित्व थियो।
१ The 1998 The - सन्तान - अमेरिकी
यो सायद एल्बम हो जसले उत्तरी दशकमा गुंडा रक र स्केट पk्कको विकास परिभाषित गर्दछ। यसको कभरमा सुनको कपाल झुम्किएको र विशाल कीर समातिएको एक जवान मानिसको साधारण उदाहरण।
१ 1999 XNUMX। - Pennywise - सीधे अगाडि
एउटा ट्या tank्क शहरको तर्फ पूर्ण गतिमा गइरहेको छ र हामी यसको ड्राइभरमा र red रातो र represented्गले प्रतिनिधित्व गर्ने केही रोष महसुस गर्न सक्दछौं। यद्यपि यो बिक्री एल्बम थिएन कि एल्बम होईन, यसले विशेष आलोचकहरूको स्वीकृति प्राप्त गर्‍यो।
२००२ - जेथ्रो टुल - विगतको साथ बाँचिरहेको
एक गोथिक क्याथेड्रलको दाग ग्लास विन्डो एक महिलाको सिल्हूटले तोड्यो जसले स्वतन्त्रताको प्रतीक, आकाशको झलक दिन्छ। यो एक डबल एल्बम हो कि ब्यान्डको विभिन्न पक्षहरू मिक्स गर्दछ र तिनीहरूको विकासको राम्रो प्रतिनिधित्व हो।
२०० - - एनओएफएक्स - कहिल्यै हिप्पीमा भरोसा नगर्नुहोस्
चित्रण रिक सुधारकर्ता द्वारा गरिएको थियो। यसमा येशू दाखमद्यको एक बोतल समात्नुहुन्छ र आफ्नो हातको साथमा भन्नुहुन्न। उपशीर्षकमा: "हिप्पीलाई कहिले विश्वास नगर्नुहोस्।"
२०० - - पर्ल जाम - ब्याकस्पेसर
कभर को रूप मा एक विशाल संख्या को असली दृश्यहरु संग एक मोज़ेक। एल्बमको रिसेप्शन संयुक्त राज्य, स्पेन, अष्ट्रेलिया वा पोर्तुगलमा महत्वपूर्ण थियो।
२०१० - Angra - एक्वा
सर्फको माध्यमबाट एउटा अनुहार देखा पर्दछ। ब्राजिलको प्रगतिशील मेटल ब्यान्ड आंग्राले गरेको यो सातौं र अन्तिम काम हो जुन ब्राजिल र जापानमा मात्र रिलीज गरिएको थियो।
२०१२ - लेड जेप्पेलिन - सेलिब्रेशन डे
सूर्यास्तमा सेटिंगको रूपमा लन्डनको साथ एक न्यूनतम उदाहरण। यो 2007 बाट लेड जेप्पेलिनबाट एक सीधा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » २२ पौराणिक रक कभरहरूको भव्य एनिमेटेड GIFs
मलाई यो चयनमा पेनीवाइज एल्बम देख्न मन पर्यो: D
Pankioman लाई जवाफ दिनुहोस्
मेटलिका र एलिस कूपरको साथ एक! यो स्वादिष्ट छ !!!